Shiinaha Warshadda Siraha Cayayaanka ee Dib Loogu Celin Karo iyo Soosaarayaasha | Cunitaanka
Siraaj Cayayaanka La Celin Karo
Moodada iyo wax ku ool ah, ku habboon in la isticmaalo halka madadaalo.Push-button bilowga u sahlanaato isticmaalaha. Bixinta USB-ga, waa la isticmaali karaa meel kasta oo aad jeceshahay. Dareere celiya, dabiici dabiici ah oo waxtar leh, kuna habboon isticmaalka hooyada iyo uurjiifka. Iftiiminta habeenkii diirran ee jilicsan, raaxada leh iyo raaxada. 10 saacadood waqtiga dejinta. Si wax ku ool ah ayay u celisaa kaneecada iyadoo la abuurayo 30m2 gudaha ama 3 mitir aagga bannaanka ee ilaalinta.
Awood la qiimeeyay 5W
Cabirka Badeecada 77 * 76 * 138mm
Gudiga xakamaynta Taabashada taabashada (10-saacad dejinta)
Aagga Codsiga 30m2 (gudaha), 3m (dibedda)
Cabbirka baakadka 515X415X415mm（40PCS / kartoonka)
1. moodada iyo wax ku ool ah, ku habboon in loo isticmaalo halka madadaalo.
Riix badhanka riix-riix si loogu sahlanaado isticmaalaha. Bixinta USB-ga, waa loo isticmaali karaa meel kasta oo aad jeceshahay.Waxaa la socda dareere celin kara, badbaado dabiici ah oo wax ku ool ah, oo ku habboon hooyada iyo uurjiifka. Iftiin diiran habeen jilicsan, raaxo leh oo raaxo leh. 10 saacadood dejinta. Si wax ku ool ah uga celisa kaneecada iyadoo abuuraysa 30m2 gudaha ama 3 mitir aagga bannaanka ee ilaalinta.
2. Hawlgal fudud
Dhagsii awoodda badhanka ayaa shidi doona nalka cagaaran si uu u daarto habka ceelasha kaneecada u badbaadiya tamarta. Xiritaanka otomaatiga ah 10 saacadood kadib.
3. Si wax ku ool ah u celisa kaneecada
Abuuritaanka 30m2 gudaha ama 3 mitir aagga bannaanka ee ilaalinta, oo ku habboon madaddaalada gudaha iyo dibedda albaabka sida cawska, balbalada, barxadda, barkadda ama sagxadda; tiknoolajiyad la xaqiijiyay oo loo isticmaalo in lagula dagaallamo kaneecada meelaha ugu adag adduunka; waxay bixisaa 10 saacadood oo difaac ah.
4. Stylish, ku habboon, la qaadi karo
Nalalka kaneecada lagu kalsoon yahay ayaa ah hadiyadda ugu fiican ee milkiile guri, marti-gelin, hawlgab, qalin-jabiyaha jaamacadda, beer-ilaaliye ama daryeel-bixiye cusub.
5. 100% badbaado u leh aadanaha & xayawaanka
Ilayska cayayaanka celiya ayaa amaan u ah dumarka uurka leh iyo ilmaha. Ma jiro sun, sun la'aan, shucaac la'aan, iyo uma baahna in la nadiifiyo cayayaanka dhintay, batari looma baahna oo koronto yar ayaa ku baxaysa. Wuxuu ku siinayaa guri ammaan ah iyo jawi saaxiibtinimo leh 100%.
Hore: Dharka Steamer
Xiga: Mini Qaboojiyaha Hawada
Siraajada Sunta Cayayaanka
Siraaj kaneecada celisa
Ilayska Saliidda Kaneecada
Nadiifiyaha sagxadda xarigga
Uumiga Dharka Gacanta